Jawbone UP3, kormeeraha caafimaad ee ugu horumarsan suuqa. | Wararka IPhone
Korjoogteynta ayaa ku jirta moodada, iyadoo xiraneysa aalado Xidhan karo Waxa loogu yeero waa wax aan aragno marba marka ka dambeysa, oo ay ku xiran yihiin dareemayaal jirku iyo in kuwani ay qayb ka yihiin dharkeenna maalinlaha ah waa qiimaha ay tahay in la bixiyo haddii aan dooneyno inaan si wanaagsan u maamulno maalinteenna maanta.
Jawbone waa mid ka mid ah shirkadaha badan ee u heellan soo saarista iyo iibinta qalabkan, iyaga ka mid ah waxaan aqoonsaneynaa noocyo ay ka mid yihiin Fitbit, Garmin, Xiaomi, Nike, Misfit iyo xitaa Razer lafteeda Nabu, laakiin Jawbone oo leh UP3 ayaa leh ku dhufo calaamadda wax ka sarreeya kuwa kale, Waxaan ula jeedaa diiradda.
Jawbone UP3 waa jijin caqli badan, laakiin maahan raad-raac jimicsi, kuuma soo wargelinayso haddii ay ku soo wacaan, mana gariiriso haddii ay farriin kuu soo diraan, mana laha shaashad ay ku tusayso macluumaad, way qabataa midna ha qaban.
Jawbone UP3 waa Raadraaca Caafimaadka, waana si hufan taasi (oo ay tahay tan ugu horumarsan suuqa xitaa maanta) taas ayaa ka dhigaysa mid gaar ah oo u oggolaanaysa inay ka soo dhex baxdo inta kale.
Halkii laga ahaan lahaa qalab loogu talagalay dadka durba firfircoon, tan wuxuu bartilmaameedsadaa dadka fadhiga badan, Jijimooyin naga caawinaya inaan fahamno caafimaadkeenna iyo sida maalinteennu maalinba maalinta ka dambeysa u saameynayso jirkeenna iyo maskaxdeenna
1 Hadafka: In kor loo qaado caafimaadkeena
1.1 Bioimpedance dareemayaal?
1.2 Maxay yihiin dareemayaashaan?
2 Waa maxay faa'iidooyinka Jawbone UP3 uu bixiyo?
4 Tilmaamaha UP3
Hadafka: In kor loo qaado caafimaadkeena
Tirinta talaabooyinka, kalooriyada, masaafada safarka, wajiyada hurdada iyo waxyaalahaas oo dhami wax khaas ah maahan, ku dhowaad € 200 jijin oo kaliya sameeya taasi waa dambi, tan waxaan ku leenahay Xiaomi Mi Band 1S qurux badan oo loogu talagalay € 20 Waxaa xitaa ku jira dareemayaal garaaca garaaca wadnaha, laakiin markaa muxuu sameynayaa jijinkan kuu oggolaanaya inaad ku guuleysato qiimahaas?
Jawbone UP3, wuxuu ka duwan yahay wearableyaasha kale, waa jijin aan muuqan, aalad leh teknolojiyaddii ugu dambeysay ee karti u leh in lagu qariyo gacmaheena si xeel dheer sida haddii ay ahaan laheyd qalab kale oo qurux badan, jijin soo bandhigeysa dhammeystir tayo leh oo xitaa u gudbi kara sida qalab bilic qurxin ah, laakiin ka dib intaas ka dib lakabkaas wanaagsan ee qaaliga ah wanaaggu wuxuu qariyaa muuqaal injineernimo ah, oo lagu rakibo dareemayaal sida seddex dhidib xawaare, aaladda Bluetooth 4.0 LE iyo nooc dareemayaasha 'bioimpedance'.
Waa wax iska caadi ah in shakiga ka dhasho shaqeynta ama ujeedada dareemayaashaan, waana meesha saxda ah halka ay kaga sarreyso kuwa kale, dareemayaashaan waxay ku yaalliin gudaha goobaatka jijinka, oo loo qaabeeyey qaab ka kooban 5 koronto oo laba jibbaaran oo dahab ah muuqaalka (oo jiritaankiisa mid iska indhatirayo markii la xidhayo iyada oo ay ugu wacan tahay muuqaalkiisa wanaagsan iyo talooyinka soo koobay) oo loo qaybiyay laba kooxood oo laba ah iyo mid dabacsan xagga sare.
Isticmaalka dareemayaashaan, waxyaabo badan ayaa lagu cabiraa, sida iska caabinta korantada ee maqaarkayaga, garaaca daqiiqadii wadnaheena, heerka neefsashada iyo xitaa waxa loo yaqaan Jawaabta Maqaarka Galvanic » ama (GSR), tan dambe ayaa ah, in si fudud loo fahmo, waxa aan ogaanno marka aan cabsanno, qabowgaas ama xiisadda ka dhex socota jirkeenna, labadaba markaan murugaysan nahay, markaan cabsanno, iyo markaan faraxsan nahay, adiga dhihi karaa waxay la mid tahay jawaab dareen ah oo maqaarka laga marinayo.
Maxay yihiin dareemayaashaan?
Hagaag, iyaga ayaaba ku mahadsan Jawbone UP3 wuxuu cabbiri karaa waxyaabo sida garaaca daqiiqadii qalbigeena markasta oo yar 24ka saacadood ee maalinta (adigoon wax tamar ah ku bixin), neefsashadeena iyo heerkulka jirkeena.
Xogtaani waxay u oggolaaneysaa jijimadu inaanay la socon oo keliya garaaca wadnaheenna maalintii oo dhan iyo habeenkii oo dhan (si loo ogaado saamaynta qaab-nololeedkeennu ku leeyahay qalbigeenna), laakiin sidoo kale in la ogaado goorta aan Wajiga hurdada REM, Muuqaal u gaar ah oo kaliya UP3 awood u leedahay, tanina waa ka muhiimsan tahay sida muuqata, maaddaama jijimooyin caadi ah ay cabiraan wejiyada hurdada ee soo socota 3 ka mid ah (Toos, Hurdo Iftiin iyo Hurdo Qoto dheer), laakiin wajiga REM Waa weji sidii muhiim u ah kuwa kale, waa wajiga aan ku riyoonayno, inta lagu jiro marxaladan (REM = REM = Dhaqdhaqaaqa Indhaha Degdega ah) maskaxdeenu waxay hagaajisaa unugyadeeda waxayna sameysaa isku xirnaanta neerfaha lagama maarmaanka u ah xoojinta xusuusta muddada-gaaban ee xusuusta muddada dheer , halka wajiga hurdada ee qotada dheer waxa ay qabato ay tahay hagaajinta muruqyada iyo kala-goysyada sida seedaha.
Ogaanshaha inta saacadood ee REM phase ee aan ku raaxeysanay hal habeen ayaa noo ogolaanaya inaan yeelano fikrad fiican haddii aan si fiican u nasannay ama haddii maskaxdeena ay wali u baahan tahay nasasho, maadaama tirakoobka iyo lafagurida hurdada ay ka dhib badan tahay in la yiraahdo Hurdo Iftiin iyo Hurdo Qoto dheer, waa wax inaga caawinaya kaliya inaan go'aansano goorta aan u soo dhowaan karno hurdada.
Waa maxay faa'iidooyinka Jawbone UP3 uu bixiyo?
Inagoo wax badan ka ogaanayna maalinteenna maalin iyo sida jidhkeennu uga jawaabo falalkeenna, waxaan samayn karnaa go'aanno caqli badan oo lagu horumarinayo tayada nolosheenna, tanna Jawbone ayaa noo diyaarisay app cajiib ah taasi waxay leedahay "tababaraha shaqsiga ah," laakiin kama hadlayo tababaraha caadiga ah ee kuu sheegaya inaad sameyso riixitaano iyo garka-kor, laakiin tababaraha ku baraya inaad ku noolaato caafimaad.
Tababaraha smart Waa magaca uu doortay Jawbone, nidaamkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad fahanto waxa ku dhacaya jirkaaga, sida noloshaadu u saameyneyso caafimaadkaaga iyo sida aad u horumarin laheyd. Tababaraha Smart wuxuu ka hadlayaa wax walba, wuxuu kuu sheegayaa markii aad si fiican u seexatay, markii aad yara seexatay, sida aad si fiican ugu seexan karto, maxaad u seexan kartaa si xun, marka qalbigaagu ku jiro qiyam aan caadi ahayn, haddii aad sameyneyso isboorti kugu filan, maxaad cuni kara si loo wanaajiyo tayada noloshaada, waxay xitaa ku tusaysaa adiga tirakoob adiga kugu barbardhigaya dadka kale ee aad isku da'da tihiin, sidaa darteed waxay la mid tahay in taleefankaaga laguu haysto kaaliye shakhsi ah oo mas'uul ka ah daryeelka caafimaadkaaga.
Ogaanshaha dhaqdhaqaaqa jirka (iyo kala soocid u dhiganta iyada oo loo marayo app)
Ogaanshaha heerka wejiga hurdada (Toos, Hurdo Iftiin, Hurdo Dheer iyo Hurdo REM)
Habka jiifka tooska ah
Alaarmiga gariirka aamusnaanta
Digniinta casriga ah (illaa 10, 20 ama 30 daqiiqo kahor waqtiga, lagu hagaajin karo barnaamijka)
Dhaqdhaqaaq la'aan (marka aan firfircooneyn) iyo nasashada (wax yar uun ka hor inta aan la toosin) cabbirka garaaca wadnaha
Tababaraha Smart: Nidaamka talooyinka iyo sharaxaadda mahadsanid taas oo aad ku fahmi doonto waxa dhacaya, sababta, iyo sida loo beddelo.
3 xakamaynta Laydhka, aan la arki karin ilaa qasabad laba jibbaaran laga sameeyo daboolka birta ee jijimadda, ka dib markaa midkood shidmayo oo tilmaamaysa qaabka firfircoon (buluug u yahay hurdo ama liin firfircoonaan).
Ogeysiiska cad ee LED oo daaraya marka arjiga UP uu ku siinayo digniin.
Hadafka la gaadhay
7 beri nolosha
Biyaha u adkaysta (ma aha quusin)
Cabir: 220mm x 12,2mm x 3mm ilaa 9,3mm
Hal cabir loogu talagalay 140mm - 190mm curcurka (hagaajin karo)
38 mAh baytariga lithium-ion polymer dib u soo celin kara
Fasalka caafimaad ee Hypoallergenic suunka TPU
Daboolka dusha sare ee aluminiumka leh (in ka yar 0,5% nikkel)
Daroogada-birta ah ee birta ku duuban birta korantada
6-pin dekedda amarka induction induction
Waxay u baahan tahay oo keliya in dib loo buuxiyo 4 jeer bishii.
Caabbinta biyaha waxay kuu oggolaaneysaa inaad xirato xitaa markaad dabbaal tagayso, laakiin haddii aad quusayso iska bixi.
Midka kaliya ee suuqa kujira ee ogaada wajiga REM.
Muuqaalkiisu wuxuu awood u leeyahay inuu weheliyo suudhka ugu fiican.
Haysashada hal cabbir waxay ka dhigeysaa mid aad u badan.
Aad ayey ugu raaxeysan tahay in la isticmaalo, waxaad aakhirka illowdaa inaad xiran tahay.
Si fudud loo xidho loona qaato
Taageero la isku halleyn karo oo ay ku jirto koobiga la soo daray (markii uu iibka ahaa ma uusan haysan, hadda wuu ku jiraa).
La jaan qaada macruufka iyo Android.
Kharashka kaliya 60 daqiiqo.
Tababaraha Smart waa qiimo weyn oo lagu daray.
Codsi aad u dhameystiran, nadiif ah oo la jaan qaada Apple Health.
Firmware la casriyeyn karo, muuqaalada cusub ee suurtogalka ah mustaqbalka.
Jijimadu wax bay kaa baranaysaa, kolba sidaad u isticmaashoba, ayaa ka sii wanaagsan talooyinkeeda.
Codsigu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad haysato xakamaynta qaadashada gacanta iyo xitaa inaad ku adkaato asxaabtaada inay ka gudbaan hadaf.
Rinjiga dusha sare ku yaal ayaa u nugul inuu xirto.
Ma cabirto garaaca wadnaha inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa jirka.
Adigu gacanta kuma cabiri kartid garaaca wadnahaaga.
Iskuduwaha iskumid ma aha Apple Health, waxaa jira barnaamij dhinac saddexaad ah laakiin qiimahiisu waa 1 99
Qiimaha kaliya la aqbali karo kuwa sidoo kale raadinaya qalab moodada ah
Dib u eegida: Juan Colilla
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Waxaan tijaabinay Jawbone UP3, oo ah kormeeraha caafimaadka ee muhiimka ah
Isla markii aan akhriyeyba in ay noqotey "mid aan muuqan" oo aan la dareemin, waxaan joojiyey akhriska maqaalka. Dhab ahaan? Xulkaas aan la arki karin? Ha i dhibin ! Qurxoon? Kaalay hadda!
Gaar ahaan suunkaas, hooyaday, si ay ugu dhejiso dharka, waxay umuuqataa mid liidata oo kacsan ilaa iyo baararka.
Hadday taasi tahay mid aan muuqan oo xarrago leh, taydu waa mid aan lagu darin xarrago, hugaamiyaha hugo, astaamaha patet (ama wax alla wixii aad qorto) ee tirada. Oo waxay igu kalliftay qayb yar oo ka mid ah qiimaha karaahiyadaas aad arkayso inay ahayd mid aad u qabow, taas oo aniga ila muuqata laakiin aniga maahan inaad sameysid maqaal gebi ahaanba eex leh.
Bal u fiirso kuwa khiyaanooyinka ku sameeya suuqa, fiiri dhammaantood kahor intaan tayda qabsan, lafdhabiguna wuxuu u muuqdaa mid aad uga cabsi badan dhammaan! Maahan shaqooyinkeeda taas haddii aysan lahayn wax cillad ah, laakiin waa maxay sharraxaadda ...
Laga yaabee inay tahay inaan soo raro sawir muujinaya, waxaan kuu xaqiijinayaa inay aad u fiican tahay oo gebi ahaanba aan la ogaan, in ka badan kuwa Fitbit, waxaad ku arki kartaa isbarbardhigga halkan:
Si daacadnimo ah Juan, dib u eegistaadu had iyo jeer waa isku mid: caws badan iyo chicha yar. Si dhab ah miyaad isku dayday jijinka? Sababtoo ah waxaad noo sheegto waxaan isku qori karaa anigoo aqriya tilmaamaha webka. Ma noo sheegaysid khibradaada, hadey tahay mid raaxo leh, ama cabirku fiicanyahay iyo inkale.
Maaddaama aadan waxba ka sheegin, waxaan rabaa inaan sheego naftayda oo aan xambaaro, oo waxaan isbarbar dhigi karaa Fitbit Charge HR iyo Apple Watch.
- Qabsashada jijimadu waa mid cabsi badan, tii ugu xumeyd ee aan arko muddo dheer. Way adag tahay in la dhejiyo oo tan ka soo horjeedda, waxay ku furmaysaa dharbaaxo kasta oo aagga ka dhacda. Marar badan bay furmaysaa markaan curcurka miiska saaro si aan wax u qoro.
- Biyo ma galeen? Hagaag, ma ogi halka aad ku aragtay taas, maxaa yeelay waa been. Waxay u adkeysataa buuqa, ma la dabaalan karto ama maydhasho.
- Dareeraha garaaca garaaca wadnaha ayaa ah mid aan la isku halleyn karin, ugu yaraan marka la barbar dhigo midka ku yaal Fitbit ama Apple Watch. Had iyo jeer waxay i siisaa soo noqnoqasho aad uga hooseysa tan dhabta ah. Ma aha in la xuso in ay cabirayso oo keliya markaad nasato, maahan marka aad jimicsato. Taasi ma tahay kormeeraha waxqabadka? Hagaag, qof baa yimid oo ii sharax.
- Waxay si fiican nooga iibiyaan dareemahooda hurdo, laakiin waxba ma aaminsani. Ma sheegi kartaa markaan kujiro hurdada REM mana ogaan karo markaan u kaco inaan musqusha aado? U ogolow mid kale inay ula socdaan sheekadan oo aanan iibsan.
Mid ka mid ah jijimooyinkii ugu xumaa ee aan isku dayay qiime ka sarreeya qof kasta, dusheedana shaashad murugo leh oo aad ka arki karto wicitaan ama ogeysiin. Kuma talinayo
Tani waa sida iPhone SE loogu soo bandhigo tijaabooyinka adkeysiga
Iibinta taleefannada iphone-ka ee la isticmaalay Hindiya waxay la kulmaan mucaaradad adag